एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन् ‘पार्टी अध्यक्ष अाेलीकाे जालझेल भयाे’
फागुन ३, काठमाडाै ।
एमाले उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ की संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै धेरैले उनी सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने आकलन गरेका थिए । शाक्य आफैँ पनि यसमा ढुक्क थिइन् ।
अाजकाे नयाँ पत्रिकामा अन्तरवार्ता छ- तर, एमालेले आन्तरिक निर्वाचनद्वारा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचनमा उपाध्यक्ष शाक्य अर्का प्रदेश सांसद डोरमणि पौडेलसँग पराजित भइन् ।
उनको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो । पराजित भएसँगै शाक्यले आफूलाई पार्टी अध्यक्षले जालझेल गरेर हराएको आरोप लगाउँदै आएकी छिन् । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री चयन, शाक्य पराजित हुनुको कारण, उनले अध्यक्षमाथि लगाएका आरोपलगायतका विषयमा प्रदेश सभा संसदीय दलमा पराजित भएलगत्तै पार्टी अध्यक्षले धोका दिए, चरम गुटबन्दी गरे भन्नेजस्ता आरोप लगाइन ।
दलको नेता चयन गर्ने अघिल्लो दिन अध्यक्षले मलाई छलफलका लागि संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाए । त्यहाँ अत्यन्त सहज वातावरणमा कुराकानी भयो । उनले स्थिति के छ भनेर सोधे । मैले स्थिति अत्यन्त राम्रो छ, ठीक छ, म जित्छु भनेँ । उनले हार्नेगरी उठ्न हुन्न भने ।म हार्दै हार्दिनँ, तपाईंले साथ दिनुपर्छ, सबै साथीले तपाईं उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र धेरै सिनियर भएकाले, समावेशिताका हिसाबले पनि तपाईंको उम्मेदवारी उपयुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ भन्ने कुरा जानकारी गराएँ । यो कुरा सुनेर उहाँले त्यसो भए उठ्नुस् भन्ने सुझाब दिनुभयो । अध्यक्षले नै यति भनिसकेपछि उहाँको सहयोग हुनेमा आश्वस्त भएँ ।
त्यसपछि सभामुख कसलाई बनाउने नाम दिनु भनेर अनुरोध गरेँ । उहाँले सल्लाह गरेको छैन बेलुकी फोन गर्छु भन्नुभयो । उहाँको यो वचनपछि म आश्वस्त थिएँ । तर, राति अबेरसम्म कुर्दा पनि उहाँले फोन गर्नुभएन । राति १२ बजेसम्म कुर्ने कुरा भएन । भोलिपल्ट आफ्नै ढंगले तयारीमा लागेँ ।
तर, मैले त्यही साँझ नै सबै माननीयलाई विभिन्न होटेलमा राख्न थालिएको सूचना थाहा पाएँ । यो सूचनाले म सशंकित थिएँ । सांसदहरूलाई किन थुन्नुप¥यो ? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा जित्ने कुरामा कुनै द्विविधा थिएन । किनभने, कुराकानी गर्दा सबै साथीहरूको सहानुभूति र समर्थन प्राप्त गरेकी थिएँ ।
तर, सबै माननीयलाई होटेलमा थुनेर भोलिपल्ट एकैपटक मतदानस्थलमा लैजाने तयारी भएको सूचनापछि मलाई के गर्न खोजेको होलाजस्तो लागेको थियो । घरबाट बोलाएर होटेलमा राख्ने, फलानोलाई मत नहाल्ने भन्ने उर्दी जारी भएको कुरा आयो । छक्क परेँ । किन यस्तो आतंक मच्चाएको होला जस्तो लाग्यो ।
सोचेकी थिएँ– अध्यक्षले नै उठ्नुस् भनेपछि त मलाई नै सहमति दिएको हो, अर्को व्यक्ति नउठाउने होला । तर, बेलुकी अध्यक्षकै निवास बालकोटमा बसेर निर्णय भएको थाहा पाएँ । मैले स्थायी समितिमा भनेँ, बालकोटमा बैठक बस्नुभएछ, त्यो बैठकमा मलाई पनि बोलाएको भए हुन्थ्यो नि त अध्यक्षज्यू ! त्यसैले, परिणामलगत्तै मलाई बालकोटको गुटबन्दीले सिध्यायो भनेकै हो । मैले के गल्ती गरेँ ? सबै कुरा तथ्य र प्रमाणसहित बोलेकी छु ।
‘उठ्नुस्, मेरो समर्थन छ’ भन्दाभन्दै तपाईंलाई हराउन अध्यक्षले किन त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नुभएको जस्तो लाग्छ ?
मैले त अध्यक्षबाट छलछामको राजनीति होला भन्ने अलिकति पनि सोचेकी थिइनँ । किनभने मेरो स्वभाव, शैली, काम गराइ सबै उहाँलाई थाहा थियो ।
प्रदेश प्रमुख भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत सिट जिताउने कामको नेतृत्व गरेकी थिएँ । त्यसैले अरू कारण होलाजस्तो लाग्दैन । मेरो त्याग छैन भने भन्नुपर्ने हो, दुःख गरेको छैन भने पनि थाहा हुनैपर्ने हो । बेइमान भए पनि भन्नुपर्ने हो । त्यसैले कुनै कारण थिएन ।
मैले भनेँ, मलाई किन हराइयो अध्यक्षज्यू ? जवाफ चाहियो । दुनियाँलाई के जवाफ दिऊँ ? आफैँलाई लाज लागिरहेको छ भनेर मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा भनेकी हुँ । तर, उहाँले राम्रोसँग जवाफ दिनुभएन । लोकतन्त्रमा चुनावमा जान्छु भनेकाले मैले तपाईंलाई उठ्नुस् भनेँ, तर पराजित भइसकेपछि ममाथि खनिन कसरी मिल्छ, भन्नुभयो ।
मैले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मानेर, चुनावमा गएँ, हारजित भयो, परिणाम पनि स्वीकार गरेँ । तर, लोकतन्त्रको नाममा सांसदलाई धम्क्याउने, थुन्ने गर्न पाइन्छ ? के मैले सबै प्रमाण दिऊँ ? म सबै प्रमाण पेस गर्न सक्छु भनेपछि अध्यक्ष बोल्दै बोल्नुभएन ।